Walaalaha Shabaabka oo Faah Faahin ka bixiyay Diyaarad siday Boqolaal Askar oo ay soo rideen | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Walaalaha Shabaabka oo Faah Faahin ka bixiyay Diyaarad siday Boqolaal Askar oo ay soo rideen	Oktoobar 13, 2008
Guutada Gantaalaha ee Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta Allaah fadligiisa waxaa u suuragashay in ay soo ridaan diyaarad Milatari oo ay lahaayeen Ciidamada calooshood u shaqeystayaasha Afrikaanka ee qeybta ka ah duulaanka Saliibiga ah ee ka dhanka ah diinteena iyo dalkeena.
Diyaaradda ay soo rideen MujaahidIintu waxaa ay ka duushay garoonka Muqdisho waxyar kadib markii ay dajisay Ciidamo ayna qaaday kuwa kale oo badal ahaan loogu qaadayay dalka Uganda,sida ay xaqiijinayaan wararka sirdoonka Mujaahidiinta ee gudaha cadowga.
Qeyb kamid ah Guutada Gantaalaha oo ribaad kaga jirtay meel aan sidaasi kaga fogeyn garoonka ayaa beegsatay diyaaradaasi iyadoona lagu bartilmaameedsaday gantaalka Sam 7 kaasi oo Allaah fadligiisa haleelay diyaaradda xilli ay dooneysay dhanka badda in ay marto marki ay garoonka ka duushay.
Durbadiiba waxay ku dhacday biyaha badda markii xoogaa ay kusii siqday gudaha badweynta,iyadoo aad u holceysa,Sirdoonka khaaska ah ee Mujaahidiinta ayaa sheegay in diyaaradda ay saarnaayeen 200 askar Afrikaan ah gaar ahaan kuwa Uganda,isla markaana badal ahaan loo qaaday.
Doomaha dheereeya ee ay leeyihiin calooshood u shaqeystayaasha ayaa durbadiiba ku yaacay badda,si ay u badbaadiyeen wixii suuragal ah laakin Allaah fadligiisa dhamaan rakaabkii dayuuradasi ee ciidamada ahaa waa ay halaagsameen.
Waxaa xusid mudan in labadii maalmood ee lasoo dhaafay cadowgu uu kasoo dajiyay garoonka in ka badan 500 askari ayna qaadeen kuwo kale oo badal ahaa,xilliga Mujaahidiintu ay xirayeen garoonka ayaa ku aadaneyd waqtigii isbadalka ciidanka gaalada,kuwaasi oo waqti badan dib uga dhacay marar badana isi soo miidaamiyay laakin maanta ay xaqiiqsadeen in Isha Mujaahidintu aysan hurdin balse loo ganbanaa.
Walaalihii howlgalkaasi fuliyay oo meel ku dhaw cadowga ku sugnaa ayaa markii ay soo insixaabayeen waxaa ay dhexda u galeen Cadowga Ugaandheeska,iyagoona halkaasi isaga caabiyay kana dilay 2 askari mid kalena ka dhaawaceen,waxaana halkaasi ku shahiiday Mujaahid kamid ahaa raggii in badan gaalada gacantooda uu ku cadaabay Allaah ayaana ka baryeynaa in uu Shahaadadiisa aqbalo.
Madaxyada gaalada maanta halaagsantay waxaanu u hadiyeyneynaa shacabkeena Muslimka ah ee dhibaateysan gaar ahaan kuwa reer Bakaaro oo si gurracan cadowgu maalmihi ugu danbeeyay ugula beegsanayay madaafiicdiisa,waxaanu adkeyneynaa in aanu sii wadi doono beegsashada diyaarad waliba oo isku soo dayda adeegsiga garoonkaasi.